Cinepolis Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu] - Luso Gamer
Cinepolis Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu]
Iyo Android nyika yakapfuma mune akasiyana masosi kusanganisira maapplication. Uyezve kunze uko akawanda akasiyana evaraidzo ane hukama maapplication anowanikwa kuwanikwa. Asi tichifunga nezverubatsiro rwemushandisi uye chikumbiro, takaunza Cinepolis Apk.
Zvinoenderana nezviri pamutemo masosi, kuisa iyo application kunopa isina muganho varaidzo yemukati muchanza cheruoko rwako. Kunyangwe chirevo chakapihwa nevakuru vakanyatsoenderana nechikumbiro. Nekuti pano mukati mepuratifomu akawanda emavhidhiyo anosanganisira mafirimu anowanikwa.
Mushure mekuisa uye kuongorora iyo Vadivelu Comedy Movie App muchidimbu. Hatina kuwana dambudziko mukati uye takatowana akawanda akasiyana mafirimu uye Series mukati. Saka iwe unoona achangoburwa mavhidhiyo ane chekuita nevaraidzo wobva waisa zvirinani Cinepolis Dhawunirodha.
Chii chinonzi Cinepolis Apk
Cinepolis Apk ndeye online bato rechitatu rinotsigirwa varaidzo application rakagadzirwa neCinépolis. Chinangwa chekupa iyi yakanakisa imwe chikuva kupa chiteshi chakachengeteka. Iko vashandisi veAndroid vanogona kutenderera uye kurodha zvisingaperi mavhidhiyo.
Rangarira zvirimo kusanganisira mavhidhiyo anosvikika mukati akasununguka kuwana. Zvinoreva kuti hapana kunyoreswa kana kunyoreswa kunodiwa kuti uwane mavhidhiyo. Chinhu chega chavangangoda kugadzikana kweinternet.
Ehe, pasina kubata yakagadzikana internet yekubatanidza hazvibviri kunakidzwa nemafirimu. Kunyangwe ivo vanogadzira vakashandisawo nekumisikidza anokurumidza maseva. Zvekugashira ese ari maviri mafaera eapp kusanganisira mavhidhiyo zvakachengeteka. Kunyangwe nekuda kwekubatanidzwa kweanokurumidza maseva, ikozvino zvirimo zvinofamba zvakanaka.
Zvakadaro vaoni vanokumbirwa kuve neinternet yakagadzikana. Pasina kubata yakachengeteka uye yakagadzikana yekubatanidza hazvibviri kunakidzwa nekufamba kwakatsetseka. Saka iwe unoda akakosha maficha ekushandisa wobva warodha Cinepolis Android kubva pano.
zera 59 MB
Package Zita air.Cinepolis
Patakaisa nekuongorora faira reapp muchidimbu, takabva tawana akawanda ma pro maficha mukati. Mazhinji akadai maficha anosanganisira mavhidhiyo anowanikwa chete kuti unakirwe mukati me premium mapuratifomu. Uye online internet nyika yakapfuma mune mamwe mawebhusaiti anosanganisira maapplication.
Asi kana zvasvika pakuwanikwa kuri nyore uye kwemahara, saka takawana izvo zvisingaenzaniswi. Uyezve, iyo premium yekunyorera mutengo inogona kudarika mazana emadhora. Izvo zvinodhura uye zvisingagoneki kune avhareji vashandisi venhare.
Naizvozvo tichifunga nezvekuwanikwa kwemahara kune zvekutanga zvemukati, vagadziri vakagadzira iyi puratifomu nyowani. Iko kwakasiyana premium Mamuvi uye Series anosvikika kuyerera mahara pasina kunyoreswa kana kunyoreswa.
Uyezve, iyo application yakapfuma mune akasiyana pro maficha. Aya ndiwo Sefa Yekutsvagisa Yechinyakare, Push Notification Chiyeuchidzo, Speedy Servers, Akapfuma Zvikamu, Inbuilt Vhidhiyo Inoridza, Yakadzama Setting Dashboard uye Mushandisi-Inoshamwaridzana Interface.
Saka wakagadzirira kushandisa mukana uyu mukuru uye uchida kunakidzwa nenguva yemahara. Kuona isingaperi premium Mafirimu uye Series. Ipapo isu tinokurudzira avo vashandisi veAndroid kudhawunirodha uye kuisa yazvino vhezheni yeCinepolis App.
App interface iri nyore uye nhare-inoshamwaridzika.
Kuisa iyo app kunopa zvisingagumi zvevaraidzo zvemukati.
Izvo zvinosanganisira ese maMovie uye akateedzana.
Hapana IPTV's inowanikwa kutenderera.
Masevha anomhanyisa achapa mapaketi edata mushe.
Nzira yekudhawunirodha Cinepolis Apk
Parizvino, faira rekushandisa rinosvikika kuwanikwa kubva kuGoogle Play Store. Asi nekuda kwezvimwe zvikanganiso zvakakosha uye nyaya dzekuenderana. Vazhinji vashandisi veandroid havakwanise kuwana faira zvakananga. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veandroid mumamiriro ezvinhu akadaro?
Saka wakavhiringika uye hauzive wekuvimba naye anofanira kushanyira webhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera. Kuti tive nechokwadi chekuchengetedza kwemushandisi isu tinoisa iyo Apk pamusoro pemafoni akasiyana siyana tisati taipa mukati mekurodha chikamu.
Kunyangwe isu takaisa iyo Apk faira pamusoro akasiyana android smartphones uye takawana pasina nyaya mukati. Kunyangwe kuwanikwa kweApk pane play store kunoratidzawo vhoti yekuvimba yevashandisi veandroid. Saka isa uye unakirwe nefaira rekushandisa pasina kunetseka.
Kusvika parizvino akasiyana mafaera ane chekuita nevaraidzo anoburitswa uye akagovaniswa pano. Avo vari kutsvaga akanakisa mamwe maapplication akafanana vanofanirwa kutevedzera zvinongedzo. Zviri Neko TV Apk uye Batanga Apk.
Saka iwe unoda akakosha maficha ekushandisa uye wakagadzirira kunakidzwa nepremium Mafirimu uye Series yemahara. Zvino mune izvi, isu tinokurudzira avo vashandisi ve-android kuisa Cinepolis Apk. Izvo zvinosvikika kuwana kubva pawebhusaiti yedu nekudzvanya kumwe chete.
Categories Entertainment, Apps Tags Cinepolis Android, Cinepolis Apk, Cinepolis App, Vadivelu Comedy Cinepolis Download, Vadivelu Comedy Movie App Post navigation
Rummy Wealth Apk Dhawunirodha Ye Android [Pamhepo Kasino]
Rlaxx TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu + Series]